China Tungsten Carbide Plates Kugadzira uye Fekitori | N & D Carbidhi
Iyo tungsten carbide mahwendefa anozivikanwawo seyakagadzika stock. Tungsten carbide, dzimwe nguva inonzi carbide, yakaoma kupfuura Corrosion-Resistant Tungsten ine yakanakisa kupfeka kuramba. Ishandise kumachina maturusi anogara kwenguva refu, akadai sekupera zvigayo uye kuisa.
Tungsten Carbide Plate mune akasiyana maratidziro zvinoenderana nevatengi 'chaiwo zvinodiwa.
Iyo yepamusoro mamiriro akapatsanurwa se sintered isina chinhu uye kukuya, inosangana akasiyana zvigadzirwa kunyorera. Tungsten carbide mahwendefa ayo anonyanya kukodzera kudzivirira nzvimbo kubva kune inopwanya uye inopwanya kupfeka. Iwo mahwendefa akagadzirwa ne tungsten carbide uye anogona kugadziridzwa nemakemikari akasiyana nziyo kune izvo zvinodiwa zveimwe neimwe yekushandisa.
Pashure: Tungsten Carbide Tsvimbo
Zvadaro: Tungsten Carbide Moulds